पहिलोपटक दशैको मुखमा नेपाल टेलिकमले दियो यस्तो सुविधा, ग्राहकहरु हुने भए खुसि ! – ईमेची डटकम
पहिलोपटक दशैको मुखमा नेपाल टेलिकमले दियो यस्तो सुविधा, ग्राहकहरु हुने भए खुसि !
थ्रिजी तथा टुजीको दरमा नै फोरजी सेवा लिन सकिने र थप शुल्क नलाग्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले दशैँका अवसरमा आइतबारदेखि नै फोरजी र अन्य सेवामा विशेष छुट दिएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलो पटक फोरजी ‘एक्टिभ’ गर्ने ग्राहकले दुई दिनको समयसहितको दुईसय एमबी डाटा बोनस पाउनेछन् ।
महाबिर पुनको कमाल बन्यो राष्ट्रिय आबिस्कार केन्द्र : गुन्द्रुक बनाउने देखि बाँदर धपाउने मेसिन सम्म (भिडियो)
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? साबधान एकपटक अबस्य पढ्नुहोस
इ–सेवाबाट प्लेनको टिकट काटे कारबाही गरिने (सूचनासहित)
तपाइको मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ ? पत्ता लगाउनुस् यसरी !
हेर्नुस्– यी हुन् कम्युटर सम्बन्धी जान्नैपर्ने २२ प्रश्न !